Yakasarudzika data nyowani kubva kuSmithers inoratidza kuti muna 2021, kukosha kwepasirese kwemaketani ekupeta makatoni emusika kuchasvika $ 136.7bn; nematani anosvika 49.27m anodyiwa pasirese.
Kuongorora kubva kumushumo unouya 'Remangwana reKupeta Mabhokisi kusvika muna 2026' kunoratidza kuti uku ndiko kutanga kwekudzokorodza kubva kudzikira kwemusika mu2020, sezvo denda re COVID-19 rakakanganisa zvakanyanya, zvese zvevanhu nehupfumi. Sezvo degree reyakajairika riri kudzoka kumutengi uye zviitiko zvebhizimusi, Smithers anofungidzira ramangwana remakomponi ekukura kwehuwandu hwe (CAGR) 4.7% kusvika 2026, kusundira kukosha kwemusika kusvika $ 172.0bn mugore irero. Iko kushandiswa kwehuwandu kuchazotevera zvikuru neichi chinoreva CAGR ye4.6% ye2021-2026 pamisika ye30 yenyika neyematunhu nzira dzekufunda, nemazana ekugadzira anosvika matani 61.58m muna 2026.
Kudya kwepakeji kunomiririra musika mukuru-wekupedzisira wekushandisa ekupeta makatoni, achiverengera 46.3% yemusika nemutengo muna 2021. Zvinofungidzirwa kuona kuwanda kwemucheto mumugove wemusika mumakore mashanu anotevera. Iko kukurumidza kukura kunouya kubva kune chakatonhora, kwakachengetedzwa, uye kuoma chikafu; pamwe nechingwa uye chikafu chevacheche. Mune akawanda mafomu ekushandisa kupeta mafomati emakatoni anozobatsirikana kubva mukutorwa kwezvinangwa zvekusimudzira mukupakata- nevakawanda vagadziri veMMGC vanozvipira kuzvipira kwakasimba kwezvakatipoteredza kusvika muna 2025 kana 2030.
Imwe nzvimbo Iko kune nzvimbo yekusiyana kuri mukugadzira makatoni emabhodhi dzimwe nzira dzechinyakare dzeplastiki mafomati akadaro matanhatu-mapakeji ekuisira kana kudzikira kuputira kwezvinwiwa zvemumagaba.
Eureka zvishongedzo zvinogona kugadzirisa zvinotevera zvinhu mukugadzira kwekupeta makatoni:
Flat mubhedha kufa-nokuveza muchina
Hwindo chigamba muchina
Firimu laminating muchina